‘I fear for my life’: UK urged not to deport Zimbabwean activist | The Zimbabwe Daily
LONDON – Human rights organisations have accused the Home Office of breaking international law after it decided to deport a Zimbabwean member of the opposition party whose life would be in danger if he returned home partly because his brother fought in the British army.
Goronga, a human rights activist and youth leader at the Movement for Democratic Change (MDC)‘s branch in Leicester, will be deported on 13 September despite evidence from Amnesty, the Crisis Group and the ZimbabweRestoration of Human Rights organisation (ROHR) that his life could be at risk if he returns.
Six people were killed in violent protests in Harare after the election on 30 July, when the Zimbabwe National Army indiscriminately shot and assault civilians. According to a report by the Zimbabwe Human Rights NGO Forum covering the period from 1 to 9 August 2018, there were a total of 199 violations by the military or suspected security personnel, including torture, including sexual torture, injuries, assaults, arbitrary arrests and 16 abductions – five of whom were later found having been tortured.
On 3 September, Zimbabwean authorities intensified their crackdown on opposition MDC Alliance party members by arresting leaders of the opposition party’s youth assembly and charged them with committing public violence.